CPL T20 : सन्दिपको पहिलो खेल आज ( सम्पूर्ण जानकारी ) – WicketNepal
Birat Jung Rayamajhi, २०७७ भाद्र ३, बुधबार १३:०९
करेबियन प्रिमियर लिग ( सिपिएल टि-२० ) अन्तर्गत नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने सम्मिलित टिम जमैका तलावाजले आज सेन्ट लुसिया जुक्स बिरुद्ध पहिलो खेल खेल्दैछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो दिन सम्पन्न २ वटा खेलहरुमा बार्बेडोस र ट्रिनबागोले जित हाँसिल गरेका छन्।
मिति र समय : अगस्ट १९, राति ७:४५ बजे ( नेपाली समय ) , १० बजे ( स्थानीय समय )
लाइभ कहाँ हेर्ने : नेपालमा सिपिएल टि-२० को स्टार स्पोर्ट्सले ( Star Sports ) प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नेछ। यस्तै अनलाइनमा लाइभ, Fancode.com नामक वेबसाइटले गर्नेछ भने Fancode App. डाउनलोड गरेर पनि प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न सकिनेछ। उक्त यापमा लाइभ हेर्न पैसा भने तिर्नुपर्छ।
कस्तो छ सन्दिपको टिम जमैका
जमैका तलावाजले २०१३ र २०१६ मा सिपिएल टि-२० को उपाधी आफ्नो नाम गरेको थियो। जमैकाले पछिल्लो सिजन भने खराब प्रदर्शन गरेको जमैकाले १० खेलमा मात्र २ जित र ८ हार बेहोर्दै छैठौं स्थानमा रहेको थियो। आन्द्रे रसेल, कार्लोस ब्रेथवेट र ओसेन थोमस जस्ता ठूला नामहरु सम्मिलित जमैका यस सिजन सन्तुलित देखिन्छ र तेश्रो उपाधी जित्ने दाउमा रहने छ।
जमैकाको सम्भावित ११: चाडविक वाल्टन, ग्लेन फिलिप्स, आन्द्रे रसेल, असिफ अलि, जर्माइन ब्ल्याकवुड, रोभम्यान पावेल, कार्लोस ब्राथवेट, सन्दिप लामिछाने, मुजिब उर रहमान, फिडेल एडवार्ड्स, ओशेन थोमस
कस्तो छ सेन्ट लुसिया जुक्स
गत सिजन बिर्सनयोग्य प्रदर्शन गरेको सेन्ट लुसियाले खेलेको ६ खेलमा मात्र १ खेल जित्न सकेको थियो। त्यसमाथि पनि हारको अन्तर निकै ठुलो थियो।
डेरन सामी कप्तानीको टिममा मोहम्मद नबि, स्कट कुग्लेगिन, नजीबुल्लाह जद्रान, साद बिन जफर र जाहिर खान जस्ता विदेही खेलाडीहरु रहेका छन्। यस्तै आन्द्रे फ्लेचर, रखिम कर्नवाल, रोस्टन चेज, केमार होल्डर, केसरिक विलियम्स जस्ता स्थानीय खेलाडीहरु टिममा छन्।
कप्तान डेरन सामी, मोहम्मद नबि, रोस्टन चेज, रखिम कर्नवाल जस्ता अल-राउण्डरले जसले ब्याट र बल दुवैबाट खेल जिताउन सक्छन्। यस्तै केमार होल्डर, केसरिक विलियम्स जस्ता तिब्र गति बलरबाट टिमले राम्रो प्रदर्शनको आशा गरेको छ। ब्याटिंगमा अन्य ठुलो नाम नहुँदा आन्द्रे फ्लेचर, नजीबुल्लाह जद्रानले जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्नेछ। बिग ब्यास लिग खेलीसकेका अफगानिस्तान चाइनाम्यान बलर जाहिर खानबाट पनि टिमले ठुलो आशा राखेको छ।
सेन्ट लुसियाको सम्भावित ११ : डेरेन स्यामी ( कप्तान ) , आन्द्रे फ्लेचर, रखिम कर्नवाल, नजीबुल्लाह जद्रान, मोहम्मद नबि, रोस्टन चेज, स्कट कुग्लेगिन, केमार होल्डर, केस्रिक विलियम्स, ओबेड म्याकोय, जाहिर खान
सन्दिपको टिमको खेलको मिति र नेपाली समय कहिले छ ?
अगस्ट २२ : Vs गुएना अमेजन वारियर्स ( १२ बजे राति )